Building Freelance Career • Brand You Academy
2. A set of skills for Freelancers - Successful Freelance Triangle
3. A set of skills for Freelancers - Branding & Networking
4. A set of skills for Freelancers - Soft skills
5. A set of skills for Freelancers - Managing Yourself
6. Skill Audit
7. 3'Cs Research - Company
8. 3'Cs Research - Client
9. 3'Cs Research - Competitor
11. Branding Yourself
13. How to Measure Your Success
၀န်ထမ်းဘ၀ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးတည်း လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ Freelance career တွေက ခုနောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်စားလာပါတယ်။ အပေါ်ယံလျှပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ လွတ်လပ်တယ် ထင်ရပေမဲ့ ဒီအလုပ်ပုံစံမှာလည်း အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိသလို၊ အရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာ Freelance career ဟာ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ချက်တွေ၊ ကိုယ့်မှာ ရှိထားရမဲ့ အရည်အသွေးတွေ၊ Networking ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ ဆိုတာတွေ၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ပြောပြပေးထားတာမို့ Freelancer အဖြစ် ရပ်တည်ချင်သူ၊ ရပ်တည်နေသူတွေအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
• Freelance career နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆန်းစစ်နိုင်စေရန်၊
• လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သိနားလည်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်၊
• ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်ကောင်းတစ်ခုကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ Freelancer တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Freelance career ကို စတင်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ ဝန်ထမ်းဘဝကနေ Freelancer အဖြစ် ပြောင်းလဲရပ်တည်ချင်တဲ့သူတွေ၊ Freelance career နဲ့ ပတ်သက်လို့ လိုအပ်ချက်တွေကို သိထားချင်တဲ့သူတွေ တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
A set of skills for Freelancers – Successful Freelance Triangle
A set of skills for Freelancers – Branding & Networking
A set of skills for Freelancers – Soft skills
A set of skills for Freelancers – Managing Yourself
3’Cs Research – Company
3’Cs Research – Client
3’Cs Research – Competitor
The best course for first step freelancer careers
Moe Thet Shein
Because Only one5stars revieon, I would like to give some stars for you. Haveanice day!
All these courses are very important to know before starting freelance Carrier.Thank you for teaching these important things.